မာရီ၏ခရီးသွား – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
မာရီ၏ခရီးသွား – လှိုင်သာယာ&Hack
အားဖြင့် အက်မင် | နိုဝင်ဘာ 19, 2021
သူ့အစ်ကို ကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိရသောအခါတွင် မာရီ၏ ခရီးစတင်ခဲ့သည်။, ဒါဟာ သူမရဲ့ မူလနေထိုင်မှုပုံစံကို လုံးဝပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။. Marie နဲ့ တွဲခဲ့တယ်။, သင်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် စုံထောက်တစ်ဦးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။. ဒီပဟေဠိဖြေရှင်းရေးခရီး, you can take advantage of your wisdom and inference to help Marie solve different types of puzzles and discover the only truth by finding hidden objects in every scene!
· အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး ကြွယ်ဝသောဂိမ်းကွက်များ 20 အခန်းများထက် ပိုများသည်။ 100 သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် မြင်ကွင်းများက စောင့်ကြိုနေပါသည်။. အခန်းတိုင်းတွင် ၎င်း၏ထူးခြားသော ဇာတ်လမ်းလိုင်းရှိသည်။, ၎င်းသည် သင့်အား နှစ်မြှုပ်ထားသော အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်သည်။!
· အနုစိတ်ဇာတ်လမ်းကို လိုက်နာပါ။, you will travel around with Marie and appreciate various customs of different countries from every beautifully finished scenario!
· Show your strong outsight and good memory to find dozens of hidden objects corresponding with character clues in each scene, ပဟေဠိအမျိုးမျိုးကိုဖြေရှင်းရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။!
·ထူးခြားသောဗိသုကာများနှင့်အလှဆင်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုရယူရန်အတွက်ဒင်္ဂါးများရရှိရန်စိန်ခေါ်မှုဇာတ်ကောင်များကိုဖြတ်သန်းပါ။. သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးယဉ်ကျွန်းကို အဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်ပြီး သင့်စတိုင်လ်ကို ကမ္ဘာသို့ပြသပါ။!
ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်နာပါ။: https://bit.ly/3wCA5lh
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Maries, ခရီးသွားခြင်း
← ကြိုးဆွဲ – လှိုင်သာယာ&Hack Idle Hamster စွမ်းအင် – လှိုင်သာယာ&Hack →
Lineage2M – လှိုင်သာယာ&Hack
စိတ်ကူးယဉ်ပုံ – လှိုင်သာယာ&Hack
Rocket League ဘေးသို့ ပွတ်ဆွဲပါ။ – လှိုင်သာယာ&Hack
တောရိပ်: စိတ်ကူးယဉ်မြင်းပြိုင်ပွဲများ – လှိုင်သာယာ&Hack